သက်ဝေ: မင်းသမီးရဲ့ အနှေးရုပ်ရှင်
ချစ်ကြည်အေး August 27, 2012 at 9:48 PM
မြူးမြူး August 27, 2012 at 9:49 PM
Like!!! Like!!! Super like!!
မြူးမြူး August 27, 2012 at 9:51 PM
Thandar Lwin August 27, 2012 at 9:56 PM
ဖိစီး မှူများ နေတဲ့ သူတယောက် တနေကုန် ဟန်ဆောင်ပြုံးရမှာ ပင်ပန်းမှာပေါ့နော် ။ ဒါမှ မဟုတ် ဆေးကြောင့်များ ပိုဆိုးလေသလားး
ဒီ အက်ဆေးအတွက် သက်ဝေကို ဘယ်လို ဆက်သွယ်လို့ရနိုင်မယ် ဆိုတာ သိပါရစေ...
သက်ဝေ August 27, 2012 at 10:35 PM
ဆက်သွယ်စရာ Email က thetwai.blog@gmail.com ပါ... ကျေးဇူးတင်ပါတယ်...း))
SHWE ZIN U August 27, 2012 at 11:12 PM
ဒီလိုမျိုးတွေ များမယ်ထင်တယ်နော် ညီမသက်ဝေ ပုံဖော်တာလေးက ပီပြင်လွန်းလှပါတယ်
tg.nwai August 28, 2012 at 12:38 AM
ချီးကျူးချင်တာကတော့ စာရေးကောင်းတဲ့ ကိုသက်ဝေကို...:) တော်ချက်...:)
ပန်ဒိုရာ August 28, 2012 at 4:59 AM
really reallyalovely piece!
မိုးငွေ့........ August 28, 2012 at 6:07 PM
Hmoo August 28, 2012 at 8:20 PM
sosegado August 28, 2012 at 11:49 PM
တော်သေးတာပေါ့ ဆေးပြားလေးပဲသောက်လို့ ဆေးထိုးအပ် မသုံးတာ၊
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျနော်ကြိုက်တဲ့ ဝိုက်တနီကို သတိရသွားတယ်။
Nwai La August 29, 2012 at 2:31 PM
Special Like !
rose of sharon August 29, 2012 at 5:28 PM
မင်းသမီးတချို့ရဲ့ လက်တွေ့ဘဝတွေကို နီးစပ်စွာပုံဖော်ပြသွားတာ ပီပြင်လိုက်တာ...
ပျိုးယုဝသုန် August 29, 2012 at 9:42 PM
ဖတ်ရင်းမောသွားရတဲ့ စာသားများ ...
ponyate August 30, 2012 at 11:59 AM